Ikhasi lasekhaya - Main - BLI · Izilimi ZamaLimi eCanada
Isikole Elementary and High
Inqubomgomo Yokuxoshwa Kwabafundi
Ukubhaliswa kweNkathi yokuhlwa
Ukuhlolwa kokubekwa kweFrance
Isivivinyo sokubekwa kwe-English
IsiNgisi nesiFulentshi eCanada
Ukufunda ngokuphila · Ukuthanda ukufunda
Ufuna ukwazi izimali zethu?
Izindawo ezimbili ezimangalisayo
I-Montreal neQuebec City
I-Montreal iyidolobha eliyingqayizivele. Umuzi lapho kuhlangatshelwa khona ulimi nezilimi. Idolobha elinambitheka laseYurophu elizokudukisa kusukela ngosuku lokuqala.
It 's city ezimbili ezikhona esiqhingini eSt. Lawrence River. Yindawo ephelele yokufunda isiNgisi nesiFulentshi bese uzicabangela e-adventure yamasiko.
Kungakhathaliseki uma ukhetha ukuza, kukhona njalo okuthakazelisayo nokujabulisayo okumele ukwenze. Kungakhathaliseki ukuthi ehlobo, entwasahlobo, ekwindla noma ebusika, kukhona njalo okuqhubekayo.
IQuebec ngumuzi omangalisayo futhi omuhle. Kuyinto yenhliziyo yesiFulentshi eNyakatho Melika. Ingxenye yeYurophu kuleli zwekazi elisha. Okukhulu emaphethelweni omfula iSt. Lawrence, eQuebec ngenye yezindawo ezihle kakhulu emhlabeni kanye nenhloko-dolobha yesifundazwe saseQuebec.
Icebile kumlando, izakhiwo kanye namasiko anesikhalazo sangempela saseYurophu.
Njengoba idolobha elikhulu kunazo zonke laseCanada eliyi-100% francophone, iQuebec yindawo ekahle yokuzicwilisa ngolimi futhi ngesikhathi esifanayo ujabulele konke okushiwo lo muzi omuhle !!
I-BLI inikeza izinhlelo ezihlukahlukene ezihambisana nezidingo zakho. Ku-BLI uzothola uhlelo olufunayo.
Izinketho zokuhlala ezihlukahlukene
Iminyango yethu yokuhlala inikeza izinketho ezahlukene ongakhetha kuzo.
Uhlelo Oluhle Lwezenhlalakahle
Phila ulimi olufunda ngokuhlanganyela ohlelweni lwethu lomphakathi olunikeza imisebenzi emihle nsuku zonke.
Ukululekwa komuntu siqu
Siyaqiniseka ukuthi uthola konke ukusekelwa okudingayo ngenkathi uhlala kulolu phiko lokufunda.
Usizo lwe-Visa & CAQ
Uma udinga i-visa yevakashele noma imvume yokutadisha ukuthi uzofika eCanada, singakusiza ngenqubo.
Singakwazi ukunakekela umshwalense wakho wezempilo, okudingeka ukuba bonke abafundi beza eCanada.
Siyakuthatha futhi sikwehlele esikhumulweni sezindiza ukuze wenze isipiliyoni sakho sokuhamba eCanada njengento elula futhi ekhululekile ngangokunokwenzeka.
Okushiwo abafundi bethu
Enye yezobuchwepheshe obuhle engake nginakho. Ngangijabule kakhulu lapha eMontreal Angazi ukuthi kwakuzoqala yini. Ukudla, abantu, izindawo, izinto ongayenza, izinto ozifunda, nsuku zonke ufunda kancane umlando waseMontreal ngendlela epholile ngempela
Ngincoma i-100% futhi ngizobuya ngingacabangi kabili
Umfundi wesiNgisi - Mexico
Lapho ngifika eCanada, ngangingazi isiNgisi noma isiFulentshi. Ngemva kokuthatha uhlelo lweBLI lweBilingual, amakhono ami olimi ezilimini zombili zithuthukisiwe okuningi. Namuhla ngingasho ukuthi ngingu-TRILINGUAL
Umfundi weBilingual - Brazil
Ngabhalisela i-BLI ukufunda IsiNgisi futhi ngaba umfundi ophakeme phakathi kwezikhathi ezingaphansi kwe-6. Othisha bachwepheshe kakhulu futhi baqinisekisa ukuthi uyaqonda futhi ufunda konke okukufundisayo. Amakilasi asebenzisana kakhulu. Isikole sinabanye abavela emhlabeni wonke ngakho ngakwazi ukwenza abangane abaningi.
Umfundi wesiNgisi - isiKorea
70, rue Notre-Dame O., i-suite 400
I-Montréal, QC, Canada, i-H2Y 1S6
763, rue St-Joseph E., i-suite 104
I-Quebec, QC, Canada, i-G1k 3C6
I-COPYRIGHT 2017 BLI · Izilimi ZamaLimi eCanada, ZONKE EZILUNGILE ZIQONDILE